Raysalwasaare Fredrik Reinfeldt oo ka hadlay xaaladda cakiran ee Masar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Raysalwasaare Fredrik Reinfeldt oo ka hadlay xaaladda cakiran ee Masar
La daabacay torsdag 15 augusti 2013 kl 12.54
Raysalwasaraha Iswiidhen Fredrik Reinfeldt oo dabajooga dhacdii Masar ka dhacday oo ay ciidamada Militerigu ku dileen booqolaal qof oo isugu soo baxay saldhig bannaan-dags oo ay sameysteen dad badan oo ah taageerayaasha ururka akhwaanu muslimiinka, ayaa ku tilmaamay waxa ka dhacdadaas mid Masar u keeni karta dib-u-dhac khatar ah.
- Waxaa jira khatar aad u weyn in xaaladdii aad u sii xumaato inta aysan ka soo rayn. Waxaa muuqda sababo looga welwelo habkii lagu gaari lahaa xukun rayid ah iyo isbeddel dimoqraadiyadeed, ayuu yiri Reinfeldt.
Waxaa kaloo sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda kaalmada dibedda in aysan Iswiidhen waqtigaan xaadir ah ku talajirin in ay joojiso kaalmada ay siiso dalka Masar, maadaama aysan lacagahaasi gelin gacanta dowladda Masar. Raysalwasaraha Iswiidhen Reinfledt ayaa ka dhawaajiyey in ay wax qaldan noqoneyso haddii la joojiyo kaalmada noocaas oo aan bixinno.
Mar su’aal laga weyddiiyey haddii ay Iswiidhen di buga fiirsaneyso hubka ay ka iibiso Masar, wuxuu ku jawaabey Reinfeldt:
- Go’aan ka gaaridda arrintaan ma ahan mid u taal dowladda Iswiidhen, waayo Iswiidhen waxaa ka jira sharci adag oo qeexaya in ay hay’ad waliba u madax-bannaan tahay in ay qiimeyn ku sameyso hawlaheeda.